နှလုံးအစားထိုးထားသော… | BOTAHTAUNG PAGODA
မေး..နှလုံးတစ်ခုလုံး ထုတ်ပြီး နှလုံးအစားထိုးထားသော ပုဂ္ဂိုလ်အနေဖြင်.
ဖြေ..ဘုန်းကြီးတို. စာပေမှာကတော့ ဟဒယဝတ္ထုဆိုတာက နှလုံးအိမ်အတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့
တလက်ဖက် လို. စာက ဒီလိုဘာသာပြန်ပါတယ်။
တဇွန်းသာသာခန်.ရှိတဲ. သွေးကို အမှီပြု ပြီး ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ ရုပ်တရားတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်တရားသည် ခန္ဓာကိုယ်အနှံ.အပြားသို. ပြောင်းရွှေ့ပါသလားလို. မေးရင်တော့
သမုတိသစ္စာနယ်အရပြောရင်တော့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ သွေးနှစ်မျိုးရှိနေတယ်၊ သန္နိစိတသွေး နှင့် သံသရဏသွေး…
(သန္နိစိတလောဟိတ ၊ သံသရဏလောဟိတ )
ရွေ.ရှားနေတဲ.သွေး နှင့် ငြိမ်ဝပ်စွာတည်နေတဲ.သွေး ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်။
သန္နိစိတသွေးဆိုတာကတော့ နှလုံးအိမ်ရဲ.အပြင်ဘက် အသည်းတို့ဘာတို.ရဲ.အပြင်ဘက်မှာ
ဒီအသည်းကို ခြောက်မသွားအောင် စွတ်စိုအောင် အတိတ်ကံက စီမံခန်.ခွဲပေးထားတဲ့ သွေးတွေရှိပါတယ်။ ဒီသွေးတွေက နှလုံး အသည်း စတဲ့ ကလီစာအမျိုးမျိုးတွေကို
ခြောက်သွေ.မသွားအောင် အဲဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ တည်ရှိနေတဲ.သွေးဖြစ်တယ်။
သူတို.က ခန္ဓာကိုယ်ထဲ မလှည့်ပတ်ဘူး။
နှလုံးအိမ်အတွင်းကနေတဆင့် ဖြတ်သန်းသွားလာနေတဲ့ သွေးတွေကတော့ သံသရဏသွေး - တစ်ကိုယ်လုံးကို ိုပျံ.နှံ.ပြီးသွားတဲ့သွေးတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒီသွေးစာရင်းထဲမှာ ဟဒယဝတ္ထု ပါဝင်နေတယ်။
ပရမတ္ထသစ္စာနယ်က ပြောရင်တော့ တကိုယ်လုံးပြန်.နှံ.ပြီး သွားပါသလားလို.မေးတော့ ..
မပြန်.နှံ.ပါဘူး၊ ရုပ်တရားတို.ဟာ ဖြစ်တဲ.နေရာမှာသာ ပျက်သွားတာ။
ဖြစ်ပြီးတာနှင့် ချက်ချင်းပျက်တယ်၊ တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို. ပြောင်းရွှေ့နိုင်လောက်အောင်
သက်တမ်း အချိန်ကာလ မရှိကြပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် နှလုံးအိမ်အတွင်းမှာ တည်ရှိနေတဲ့
တလက်ဖက်ခန်.မျှလောက်သော သွေးကို အမှီပြုပြီးတော့ ဒီဟဒယဒသကကလာပ်လို. ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ ရုပ်သဘောတရားတွေဟာ ကာယဒသကကလာပ်၊ ဘာဝဒသကကလာပ်၊ ဇီဝိတနဝကကလာပ်၊
စိတ္တဇအဋ္ဌကလာပ်၊ ဥတုဇအဋ္ဌကလာပ်၊ အဟာရဇအဋ္ဌကလာပ် ဆိုတဲ. ရုပ်ကလာပ်တွေနှင့် ပေါင်းစုပြီး
တော့ အတူတူ ပြိုင်တူဖြစ်ပေါ်နေကြတာ ဖြစ်တယ်။ ဖြစ်ပြီးတာနှင့် ချက်ချင်း ပျက်တယ်။
ဒီလို ဖြစ်ပြီးပျက်နေတဲ့ ရုပ်တရားတွေမှာ ပုဂ္ဂိုလ်တဦးက နှလုံးကို အစားထိုးကုတော့ နှလုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီပဲ ထားပါတော. …
တပည့်တော် သိသလောက် ဆရာဝန်တွေကို မေးကြည့်တဲ့အခါ မှာ စက်ကိရိယာတစ်ခုကိုတော့
သူတို့အသုံးပြုရပါတယ်။ နှလုံးအိမ်ကို ခွဲစိပ်တဲ.အခါမှာ စက်ကိရိယာတစ်ခုကို အသုံးပြုလိုက်တဲ့
အခါကျတော့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဒီသွေးကို လည်ပတ်အောင် ဒီစက်ကရိယာနှင့် ပြုပြင်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလို သွေးကိုလည်ပတ်အောင် လုပ်လိုက်တော့ မူလနှလုံးအိမ်ရှိတဲ့ နေရာမှာ
သွေးမရှိတော့ ဒီဟဒယဝတ္ထုတွေက ဘယ်မှာသွားပြီး မှီဖြစ်သလဲလို. မေးစရာရှိတယ်..
အဲဒီစက်နှင့် လည်ပတ်နေတဲ့ တစ်နေရာမှာ ဒီဟဒယဝတ္ထုရုပ်တွေက ဆက်ခါဆက်ခါ ဖြစ်နေတာပါ။
ဒီလိုဖြစ်နေရာမှာ ဒီပုဂ္ဂိုလ်က ကံအရှိန်အဝါ မကုန်သေးဘူးဆိုရင်တော့ ဆက်ဖြစ်မှာ ဖြစ်တယ်။
ကံအရှိန်အဝါက ကုန်ပြီဆိုရင်တော့ ဒီလိုခွဲစိပ်ရင်းနှင့်လည်း ကွယ်လွန်ချင် ကွယ်လွန်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကံ အရှိန်အဝါမကုန်သေးလို့ ကမ္မဇရုပ်လို. ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ ဟဒယဒသကကလာပ်ရုပ်တွေက ဆက်ခါဆက်ခါ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဒီစက်ထဲမှာ စက်နှင်.လည်ပတ်နေတဲ့ သင့်တင့်တဲ့ သွေး
တစ်နေရာလောက်မှာတော့ ဒီရုပ်တွေက ဆက်လက်ပြီး ဖြစ်နေပါတယ်။
နောက်ထပ် နှလုံးကို အစားထိုးပြီးတော့ လမ်းကြောင်းပြောင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ
ထိုနှလုံးအိမ် အတွင်းကို ဒီသွေးတွေက ဖြတ်သွားတော့ အဲဒီနှလုံးအိမ်အတွင်း သင့်တဲ့ တစ်နေရာမှာပဲ
ဒီဟဒယဝတ္ထုရုပ်တွေက ထပ်မံပြီး ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သို.သော် ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အကယ်၍ သေလောက်တဲ့ကံ ပါခဲ့ရင်တော့ အခုလို ခွဲစိပ်ရင်းနှင့်လည်း သေချင် သေသွားနိုင်တဲ့ သဘောရှိတယ်။ အဲဒီအချိန်ခါမှာ ဒီဟဒယဒသကကလာပ်ရုပ်တွေ လည်း
ဆက်ပြီး ဖြစ်နိုင်တဲ. စွမ်းအား မရှိဖြစ်ပါတယ်နော်။
(နှလုံး အစားထိုးထား သူများလည်း ဟဒယဝတ္ထု ကို ရှုလို.ရပါသည်။)
Credit : Mee Nge Hnin